मर्जर पछि नबिल बैंकमा यसरी हुँदैछ कर्मचारी व्यवस्थापन - Aarthik Sanjal
मर्जर पछि नबिल बैंकमा यसरी हुँदैछ कर्मचारी व्यवस्थापन
आर्थिक सञ्जाल	काठमाडाैं	जेठ १२, २०७९
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षभित्र मर्जर र प्राप्ती गरिसक्ने गरी अघि बढेको नबिल बैंक लि. र नेपाल बङ्गलादेश बैंक लि. ले कर्मचारी समायोजन को व्यवस्थापन मोडालिटी पनि मोटामोटी मिलाइसकेको बताइएको छ ।
आगामी २०७९ असार महिनाभित्रै मर्जर गरेर एकीकृत कारोबारको तयारी गरेका यी दुई बैंकले सिनियर लेबलका कर्मचारीको टुङ्गो लगाएको छ ।
जसमा सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना रहने सहमति भैसकेको छ । दोस्रो सिनियर डेपुटी सीईओमा नबिल बैंक लि.का डेपुटी सीईओ रहेका सुजित शाक्य रहने छन् ।
अन्य डेपुटी सीईओमा क्रमशः विनय रेग्मी, मनोज ज्ञवाली र एनबि बैंक लि.का कामु सीईओ रहेका भुपेन्द्र पाण्डे रहने सहमति भैसकेको छ । एन.बि. बैंकमा डेपुटी सीईओ सुरेन्द्र भुषण श्रेष्ठको पनि डिपुटी सिइओमै व्यवस्थापन हुने भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ र रणनीतिक विस्तार विज्ञको रुपमा रहेका आदर्श बजगाईं डीजीएमको रुपमा रहनेछन् । त्यसपछि एन.बि. बैंकका डेपुटी जनरल म्यानेजर रघुकृष्ण श्रेष्ठ र सलोनिका सिंह रहने बैंक स्रोतले जनाएको छ ।
नेपालको नम्बर १ नबिल बैंक लि.ले एन.बि. बैंकलाई अक्वायर गर्ने भएपछि धेरै कर्मचारीको बिल्लबाठ हुने देखिन्छ ।
नबिल बैंक लि.ले एन.बि.का अफिसर माथिका सबै कर्मचारीलाई एक तह घटुवा गर्ने जनाएको छ । एन.बि. बैंकमा अफिसर माथिका कर्मचारी १ सय ८० जना रहेका छन् ।
नबिल बैंकले धेरै सिनियर लेबलका कर्मचारी नलिने जनाउ दिएपछि एन।बि। बैंकले १ साताअघि स्वैच्छिक अवकाश योजना सार्वजनिक गरेको छ । एन.बि. ले कर्मचारीको लेबल अनुसार १५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका तथा ५० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीले अवकासमा भाग लिन सक्ने गरी स्वेच्छिक अवकासको स्किम ल्याएको छ ।
एन.बि. बैंकले ल्याएको अवकाश योजनामा धेरै कर्मचारी आकर्षित हुने जनाइएको छ । बैंकले १५ महिनादेखि २४ महिनासम्मको सेवा सुविधा लिएर जानसक्ने अवकाश योजना ल्याएको छ ।
जसमा पियन र ड्राइभरले २४ महिनाको सुविधा पाउने छन् भने डेपुटी सीईओ सुरेन्द्र भुषण श्रेष्ठले १५ महिने अवकाश योजनाबाट बाहिरिन सक्ने चर्चा छ ।
१२ जेठ २०७९, बिहीवार ०८:१२ बजे प्रकाशित